ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅ မှာ ပါဝင်လိုက်ပါ!
ဤသည်မှာ ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စာလွှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ဆိုချက်များ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့ဟာ ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ ၁၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပါ!
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ လူတွေဟာ ဒီပွဲမှာ ပါဝင်ကြပြီးတော့ မေတာစာမျက်နှာမှာ သူတို့ရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို စတင်ပေါင်းထည့်နေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ မွေးနေ့ကို ဆင်နွဲနေကြချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရောဂျက်များအားလုံးနဲ့ နှီးနွယ်များလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ပိုမိုသတိပြု မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ ဒီပွဲမှာ ပါဝင်လိမ့်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အစီအစဉ် မဆွဲရသေးဘူးလား? မပူပါနဲ့၊ အောက်မှာ ပါဝင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို ပြထားပေးပါတယ်။
အရာအားလုံးကို ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅ မေတာ စာမျက်နှာမှာ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ပြသနိုင်ဖို့ များစွာသော အချက်အလက်တွေ ရှာဖွေနိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅ လိုဂိုစာရင်း မှာလည်း အဖွဲ့ဝင်တွေ ရေးဆွဲဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။
သင့်အနေနဲ့ မေးစရာတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး Zachary McCune သို့မဟုတ် Joe Sutherland ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပျော်စရာ ဝီကီပီးဒီးယား ၁၅ ပါ!
-ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_15/MassMessages/Get_involved/my&oldid=15159547"
This page was last edited on 19 December 2015, at 07:30.